NorthernLight- MountainBike- Ski and Hike Skibotn - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFinn Hugo
Indlu endala yefama ikwifama yeegusha esebenzayo kumgama we-120 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya iTromsø. Ingaphakathi lendlu lidala kwaye lihlala lipholile, linebalcony kunye nendawo yomlilo yangaphandle. Iigusha zibhadula emadlelweni, yaye ebusika ixhama elikhulu liye lityelele ifama. Ukuba ujonge olunye ulungiselelo lwelokal olunje nge-dogsledding, i-whale okanye i-scooter safari ,,, ukubukela iinyamakazi kunye neendawo ezintle zefoto yokukhanya yasentla kunye nefilimu, ndibuze kwaye ndingakwenza uqhagamshelane
Seppola .Lambela okanye Koht.
I-Artic Universtity Norternlight Observatory itholakala eSkibotn ngenxa yeemeko ezinesibhakabhaka esicacileyo, umoya owomileyo kunye nemozulu entle, ngoko ke ukuba kukho ukukhanya okungasentla emoyeni uya kuyibona apha!
Kukho indalo eninzi yokuzonwabisa eSkibotn. Ukuhamba ngentaba, ibhayisekile yeentaba, kunye ne-skiing Top-tours, ndingacebisa umkhondo okhuselekileyo wokuya kwintaba ye-ADJEKA (1462 m) kunye nezinto ezinokwenzeka ezihle kakhulu. Zininzi iindlela zokuhamba intaba kule ndawo, kwaye nganye yazo ithengiswe kakuhle ukuze ufumane indlela. Olona hambo lunikezayo luhambo lwe-2km apho uya kufumana ingxangxasi enkulu ebizwa ngokuba yiHengen.
Ukusuka efama kukho:
- indawo yokutyela, 1km
Umbuki zindwendwe ngu- Finn Hugo